Strengthening Innovative Social Entrepreneurship Practices for Disruptive Business Settings in Thailand and Myanmar Project (STEPup Edu, Co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union) – NMDC
Strengthening Innovative Social Entrepreneurship Practices for Disruptive Business Settings in Thailand and Myanmar Project (STEPup Edu, Co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union)
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on Strengthening Innovative Social Entrepreneurship Practices for Disruptive Business Settings in Thailand and Myanmar Project (STEPup Edu, Co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union)
We proudly introduce another Myanmar partner…
The powerful team of the National Management Degree College (NMDC), which is lead by Dr. Tin Tin Htwe, the Principal of the NMDC, accompany with Dr. Aye Thanda Soe, Professor and Head of Department of Tourism; Dr. Thynn Thynn Myint, Professor and Head of Business and Economic Department; Daw Khin Sandar Thein, Lecturer at Department of Tourism; Daw Mon Mon Oo, Lecture at Business and Economics Department; and Daw The The Hein, Lecturer at English Department.
NMDC VSF 2.0 Tourism Week
NMDC VSF 2.0 Tourism Week ဟာကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတူတကွ ပူပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့် အခုဆိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ… ယခုလိုပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ NMDCSU နဲ့ Tourism Week အတွက် မိမိတို့ team အလိုက် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ [...]
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်အစီအစဉ်
“IDFC 2020 Symposium: An Afternoon with Sustainability”
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ….. နေ့လည်ခင်းလေးတစ်ခုကို ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်သွားအောင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ တွေ့ရမယ်။ အမြင်တွေကို ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြမယ်။ ဂျပန်ရိုးရာတွေ လေ့လာပြီး သူငယ်ချင်းအသစ်တွေလည်း ရမယ်ဆိုရင်ရော? မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက လူငယ် ၂၈ ဦးဟာ IDFC [...]